Joshua, vaGibhiyoni, Uye ‘Zuva Rakaramba Rakamira!’ | Zvidzidzo zveBhaibheri Zvevana
Mashoko pamusoro pezvakaitika kuJeriko akasvika kune vanhu vemamwe marudzi emuKenani. Madzimambo avo akafunga kuti abatane kuti arwise vaIsraeri. Asi vaGibhiyoni vakafunga zano. Vakaenda kuna Joshua, vakapfeka hembe dzakasakara-sakara vakati kwaari: ‘Tabva kunyika iri kure chaizvo. Takanzwa nezvaJehovha uye zvese zvaakakuitirai kuIjipiti nekuMoabhi. Tivimbisei kuti hamusi kuzotirwisa uye tichabva tava vashandi venyu.’
Joshua akabvuma zvavakataura uye akati aisazovarwisa. Papera mazuva matatu, akazoziva kuti vakanga vasingabvi kunyika iri kure. Vaigara munyika yeKenani. Joshua akabvunza vaGibhiyoni kuti: ‘Nei makatinyepera?’ Ivo vakati: ‘Nekuti taitya! Tinoziva kuti Jehovha Mwari wenyu ari kukurwirai. Tapota musatiuraya.’ Joshua akaita zvaakanga avavimbisa uye akavarega vari vapenyu.
Pasati papera mazuva, madzimambo 5 evaKenani pamwe chete nemasoja avo vakauya kuzorwisa vaGibhiyoni. Joshua nemasoja ake vakafamba usiku hwese vachienda kunonunura vaGibhiyoni. Hondo yakatanga mangwanani-ngwanani ezuva rakatevera racho. VaKenani vakatanga kutiza vakananga kumativi ese. Kwese kwavaitizira, Jehovha ainayisa chimvuramabwe chikuru pavari. Joshua akabva akumbira Jehovha kuti aite kuti zuva rimire. Nei akakumbira kuti Jehovha adaro iye aiziva hake kuti zuva rakanga risati rambomira? Nekuti Joshua ainyatsovimba naJehovha. Musi iwoyo, zuva harina kunyura kusvikira vaIsraeri vakunda madzimambo evaKenani nemasoja avo.
“Shoko renyu rekuti ‘Hongu’ ngaringova hongu, ‘Kwete’ wenyu, kwete, nekuti zvinopfuura izvi zvinobva kune akaipa.”​—Mateu 5:37
Mibvunzo: VaGibhiyoni vakaitei kuti vazvidzivirire? Jehovha akabatsira sei vaIsraeri?
Unogona sei kuva nechivimbo chakafanana nechaiva naJoshua pakuzadziswa kwevimbiso dzaMwari?